၂၄ နာရီ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment ၂၄ နာရီ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ North Indian Ocean, NW-Pacific, rainfall-24hr မေလ-၂၅ ရက်၊ ၁၅၃ဝ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on May 25th, 2013%
မေလ ၂၅ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၅၃ဝ နာရီအထိ လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအချို့ ဒေသများတွင် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေအား မြေပုံပေါ်တွင် လေ့လာနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် အခြားမိုးများခဲ့သည့်ဒေသများအား အကြီးချဲ့၍ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့် အခြေအနေ(အပေါ်ပုံ)
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း အထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း(အောက်ပုံ) ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း(အောက်ပုံ) ရန်ကုန်တိုင်း-ခရမ်းသုံးခွ၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ် (အောက်ပုံ) . . . → Read More: မေလ-၂၅ ရက်၊ ၁၅၃ဝ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ
Leaveacomment ၂၄ နာရီ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ TRMM 24 hours Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum